Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho (Injineer Yariisow), ayaa la sheegayaa inuu shaqadii eryay 13-Qof oo isugu jira agaasimye waaxeedyo iyo shaqaalo ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir.
Inkastoo Guddoomiye Yariisow uusan soo saarin Wareegto uu xilka kaga eryayo shaqaalahan ayaa hadana warar aan heleyno waxay sheegayaan in lagu wargeliyay iyagoo guryahooda jooga shaqadii laga joojiyay,islamarkaana aanay mardambe u soo shaqo tagi Karin xafiisyada ay ku leeyihiin Maamul Gobolka Banaadir.
Inkastoo uusan Duqa Muqddisho cadeyn sababta uu dadkani shaqadada kaga eryay ayaa hadana qaar ka mid ah shaqaalihii la eryay oo aan la hadalnay waxay inoo sheegeen in Eryidooda sabab u tahay taageero ay u muujiyeen mas’uuliyiin horay xilka gobolka Banaadir u soo maray iyo waliba in looga shakiyay iney u jan jeeraan dhanka Mucaaradka.
Xukuumadda Nabad iyo Nolol ee uu Hoggaamiyo Xasan Cali Kheyre ayaa la soo baxday dhaqan ku cusub siyaasadda ah oo u nuuc eg dhalinyaro xifaal-tameysa oo midba mar aargoosanaya.
Ma ahan markii ugu horeysay oo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng: Yariisow uu shaqada ka fariisiyo shaqaalo iyo mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir,kuwaas oo taageeray ama ka qeyb galay xafladaha Mucaaradka.
Bishii October 4,2018, ayay ahayd markii wareegto ka soo baxday Xafiiska Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho shaqada looga joojiya lataliyihiisa gaarka ahaa ee dhanka saxaafadda Shadoox Xaaji Shadoor.
Qoraalka shaqo-jojinta ah shadoor Xaaji Shadoor ayaa ku soo beegan,iyadoo maalintaasi Muqdisho lagu qabtay xaflad looga dhawaaqay Xisbiga Midowga Nabada iyo Horumarka UPD,kaas oo uu hoggaaminayo Xasan Sheikh Maxamuud,adaxweynihii hore ee Soomaaliya,shadoorna uu ka qeyb galay.